विचार/दृष्टिकोण | Jwala Sandesh | Page 8
के तपाईंलाई सामान्य भन्दा बढी नै ज्वरो आएको छ ? वा तीन दिनसम्म पनि ज्वरो घटेन र रुघाखोकी समेत लागिरहेको छ ? यदी यसो हो भने तपाईंलाई मौसमी रुघाखोकी (ईन्फ्लूएञ्जा) अर्थात स्वाइन फ्लू भएको हुनसक्छ । यो ईन्फ्लूएञ्जा’ए’ एचवानएनवान भाईरसलाई ‘स्वाइन् फ्लू’ पनि भनिन्छ । पहिले पहिले सुंगुरबाट सर्ने भएको यसलाई ‘स्वाइन् फ्लू’ भनिएपनि हाल आएर मान्छेबाट मान्छेलाई नै सर्ने भएकाले यसलाई मौसमी रुघाखोकी भन्न थालिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका भेक्टर [...]
बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको हेला, हिंसा तथा दूव्र्यवहार आदिबाट संरक्षितभई सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार छ । यी अधिकारको प्राप्तिकालागि विश्वमा विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरु क्रियाशील छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रियस्तर देखि स्थानीय वा गाउँस्तरसम्म विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचरिक संस्था तथा निकायहरु बालअधिकारको प्रवद्र्धन गर्न तथा बालसंरक्षणका लागि क्रियाशील भएका छन् । गाउँ, समुदाय तथा टोलहरुमा स्थानीय श्रोत, साधनको प्रयोगमा [...]
निर्मल अधिकारी श्री नगर प्रमुख ज्यू, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख मलाई तपाईले रामो सँग त चिन्नुहुन्न होला । म एउटा सामाजिक अभियान्ताको रुपमा काम गर्ने दैलख वासी नै हु । तपाईको नगरपालिकामा विगत २ महिनाको अन्तरालमा २ जना चेलीले छाउपडी बसेकै अवस्थामा अकालमै ज्यान गुमाए । त्यसमा तपाई पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ । त्यसको समाचार स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा समेत देख्न र पढ्न पाईयो । म अहिले सुन्दैछु, दैलेखको [...]
युवा क्लवद्वारा बाटो मर्मत
दैलेख, साउन १४ – वर्षायामको पानीले बिग्रेको नारायण नगरपालिका वडा नं. ११ विन्ध्यावासिनी जाने मोटर बाटो समाजसुधार क्लबका युवाहरूको अग्रसरतामा मर्मत सुधार गरिएको छ । समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, स्थानीय गाडीचालक र गाडी मालिक समेतको सहभागिता रहेको अध्यक्ष प्रेमबहादुर बिष्टले बताए । वर्षातको कारण सदरमुकाम अस्पतालसम्म पुर्याउन समेत कठिनाई भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी बाटो मर्मत सुधार गरिएपछि यात्रुहरूलाई समेत आवतजावत र ब्यापारीलाई समान ढुवानी सहज [...]
निर्मल अधिकारी नेपालको नयाँ राजनैतिक संरचना अनुसार बालिक मताधिकारको प्रयोगबाट जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने कार्य सकिएको छ । विगत १५ वर्ष देखि रिक्त स्थानीय निकायहरुमा जनताका प्रनितिनिधि छनौट गरिएका छन् । जनताहरु आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न यती सम्म आतुर देखिए जुन लामो दुरीको यात्रा तय गरी आफ्नो मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पुगे । यसले के देखाउछ भने जनप्रनिधिविहिन स्थानीय निकायबाट सेवाग्राहीले सेवा लिदा धेरै सास्ती भोगेका थिए । जसको उपज उनीहरु आफ्ना [...]
निर्मल अधिकारी दैलेख, आज भन्दा १४ वर्ष अगाडी म एउटा गैह्र सरकारी संस्थाको शुसासन र द्धन्द्ध व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिममा सुर्खेत पुगेको थिए । उनी सँगको मेरो पहिलो भेट त्यही तालिम हो । त्यतिखेर प्रो पब्लिकमा कार्यरत केदार खड्काको सहकार्यमा हामीले दैलेख जिल्लामा शान्ति ¥यालीको आयोजना ग¥यौ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन चलिरहेका बेला म, भण्डारी र साथी महेन्द्र खड्काको अभियान शान्ति ¥याली गर्नु थियो । त्यतिखेर म शिक्षक थिए । शिक्षक पेशालाई त्यागेर २०६६ सालमा [...]
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता, नारयाण नगरपालिकाका नगरसभापति, वडा नम्बर ६ वडा अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् प्रकाश न्यौपाने । प्रस्तुत छ युवाका रोलमोडल, युवा संगठक र उम्मेदवार न्यौपानेसँग यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन र उनको उम्मेदवारीका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । नारायण नगरपालिाकाको महत्वपूर्ण वडा मध्येको एक वडा नम्बर ६ हो, यो वडामा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै गर्दा के के योजना बनाउनु भएको छ ? मेरो उम्मेदवारी वडा नम्बर ६ लाई [...]
प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?
सूूर्य खड्का पञ्चायतविरुद्ध ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि नेपालको न्यायालयले नेपाली राजनीतिलाई संक्रमणतिर धकेल्न के कति योगदान वा व्यवधान गर्‍यो ? यो बहसको विषय हुन सक्छ । तर, केही त्यस्ता अदालती फैसलाहरु पनि छन्, जसले नेपालको राजनीतिलाई संक्रमणतिर धकेलेको छ नै । ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा आफ्नो धन्यवाद प्रस्ताव विफल भएपछि दम्भपूर्वक संसद भंग गरेर राजनीतिक अस्थिरताको जग हाले । त्यतिबेला कोइरालाको संसद् विघटन [...]